4050-5000mAh Factory, mpamatsy - China 4050-5000mAh mpanamboatra
Li-po Battery 5565113 3.7V 5000mAh Batter Cell ho an'ny Speaker Bluetooth, Interphone, Power Bank ， Finday
Ny batterie PLM-5565113 3.7V 5000mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Baterin'i Li-po 605890 3.8V 4900mAh Sela momba ny bateria ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, banky herinaratra
Ny batterie PLM-605890 3.8V 4900mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Detector leakà entona Single Battery Leak Alarm Battery ERT-04 3.7V 4600mAh Polymer Lithium batterie ho an'ny Detector Gas Composite
Ny batterie PLM-ERT-04 3.7V 4600mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.